डाक्टर, नर्सलाई नै छैन मास्क, कपडाको मास्क सिलाउँदै अस्पताल – Health Post Nepal
२०७६ फागुन ३० गते १७:२५
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका बीच नेपालमा मास्कको चरम अभाव देखिएको छ । दुवै छिमेकी मुलुक तथा बढी आवत–जावत हुने युरोपीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा खाडी मुलुकहरू कारोनाबाट प्रभावित बनेपछि नेपालमा भाइरसको जोखिम बढिरहेको छ । सर्वसाधारणमा संक्रमणको भय पनि थपिँदै छ । यद्यपि, भाइरससित डाराउने नभई सतर्कता अपनाउनु नै बच्ने उत्तम उपाय भएको चिकित्सकहरू बताइरहेका छन् ।
बजारमा सर्जिकल मास्क अभाव भएपछि सर्वसाधारण मात्र होइन, बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले समेत मास्कको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भाइरसको उच्च जोखिमका बीच काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरू विनामास्क जोखिम मोल्न बाध्य बनेका छन् । मास्कको चरम अभाव हुनुमा कालोबजारी अत्यधिक मागसँगै कालोबजारी प्रमुख कारण बनेको छ । विभिन्न फार्मेसी तथा सर्जिकल हाउसले कालोबजारी गर्ने उद्देश्यले मास्क लुकाएपछि बजारमा अभावको अवस्था सिर्जना भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
अस्पतालको मागअनुरूप सप्लायर्सले मास्क नदिएको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी बताउँछन् । उनका अनुसार २० हजार मास्कको माग गर्दा सप्लायर्सले ५ हजार मा दिने गरेका छन् ।
‘जसोतसो निर्वाह गर्दै आएका छौँ,’ निर्देशक डा. सेन्चुरीले भने, ‘मास्क आवश्यकताअनुसार पाइँदैन, पाएकोमा पनि मूल्य बढेर आएको छ ।’
अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा मास्क नआएपछि अप्रेसन थिएटरमा काम गर्ने डाक्टर तथा नर्सलाई समस्या परिरहेको चिकित्सक बताउँछन् ।
यस्तै अवस्था अन्य अस्पतालको पनि छ । मास्क किन्नै नपाइरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्गा बताउँछन् । ‘सर्जिकल मास्क अभावका कारण हामीले कपडाको मास्क सिलाउन दिएका छौँ,’ डा. खड्गाले भने, ‘सर्जिकल मास्कको अभाव नै छ ।’
यस्तै कथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पनि छ । सर्जिकल मास्क पाउन छोडेपछि कपडाको मास्क सिलाएर लगाउन थालेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले बताए ।
कोराना भाइरस डिजिज (कोभिड–१९) को अनावश्यक त्रासका कारण अनावश्यक रूपमा मास्कको प्रयोग बढेकाले अभाव निम्तिएको छ । चिकित्सकका अनुसार उपचारमा संलग्न डाक्टर, नर्स, कोरोना संक्रमण आशंस्पद बिरामी, क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिक, ज्वरो आएका तथा रुघाखोकी लागेका बिरामी, विमानस्थलमा चेकजाँचका लागि बसेका स्वास्थ्यकर्मीले मात्र मास्क प्रयोग गनुपर्ने हुन्छ । तर, आवश्यक नभएका व्यक्तिले मास्कको बढी खपत गर्दा अभाव निम्तिएको छ ।
मानिसहरू अनावश्यक रूपमा मास्क लगाएर हिँडिरहेको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी बताउँछन् ।
‘जसलाई मास्कको आवश्यकता नै छैन, उनीहरूले घरमा लगेर अनावश्यक रूपमा स्टक राखेको सुनिएको छ,’ डा. भण्डारीले भने, ‘मानिसहरू बेकारमा एन९५ मास्क लगाएर हिँडेका छन्, संक्रमितको नजिकमा जाने व्यक्तिबाहेक अरुलाई यसको आवश्यकतै पर्दैन ।’
डा. भण्डारीका अनुसार मास्कको प्रयोगले मात्र भाइरसबाट जोगिन सकिँदैन । ‘मास्कको प्रयोग गरे पनि बारम्बार हात नाक–मुखमा पुर्याउँछ भने भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ,’ डा. भण्डारीले भने, ‘बारम्बार हात घुने गर्यौँ भने भाइरसबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।’
टेकु अस्पतालमा हाल ३ वटा भेन्टिलेटर छन् । कोरोना भाइरसको आशंका लागेका व्यक्ति टेकु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । बिरामीको चापअनुसार उपलब्ध भेन्टिलेटरले नधान्ने भएकाले अस्पतालले १२ देखि १५ वटासम्म भेन्टिलेटर थप गर्ने योजना बनाएको डा. भण्डारीले बताए ।
सरकार भन्छ– आयातका लागि सहजीकरण गर्दै छौँ
मास्क उत्पादनका लागि आवश्यक कञ्चापदार्थको आयातमा सहजीकरण गर्न लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहाल बताउँछन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सचिवसित कच्चापदार्थको आयातमा तीव्रता दिनेलगायत सहजीकरणका विषयमा छलफल गरेको दाहालले बताए ।
‘कच्चापदार्थ आयातमा अप्ठ्यारो झेलिरहेका जोकोहीलाई प्रमुखताका साथ सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ दाहालले भने, ‘अब मास्कको सायद अभाव नहोला ।’
मास्क अभाव हुन नदिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको समन्वयमा अनुगमनको काम तीव्र बनाएको दाहालको भनाइ छ ।
नेपालमा किन हुन सक्दैन सर्जिकल मास्कको उत्पादन ?
अहिले देशमा मास्क बनाउन आवश्यक कच्चापदार्थ भित्रिन छोडेको छ । नेपालमा सबैजसो कच्चापदार्थ भारत र चीनबाटै आउने गरेका छन् । अहिले यी दुवै छिमेकी देश कोरोनाबाट प्रभावित बनेपछि उनीहरूले कच्चापदार्थ निर्यात सीमित गरेका छन् ।
अहिले बजारमा खासगरी सर्जिकल मास्कको अभाव चुलिएको छ । यो मास्क बनाउन फेब्रिक (निलो वा सेतो), फिल्टर, इलास्टिक इयर लुप, नोज वायरजस्ता कच्चापदार्थ आवश्यक हुन्छ । यी कच्चापदार्थविना बनाइएको साधारण मास्क त्यति प्रभावकारी हुँदैन । चिकित्सकीय दृष्टिकोणले सर्जिकल मास्क बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
१५५ वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा, थप्ने योजनामा मन्त्रालय
सरकारले करिब १ महिनाअघि कोरानाको उपचारका लागि १५५ वटा आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोनको संक्रमण फैलिएमा नियन्त्रणका लागि सरकारले थप आइसोलेसन बेडका लागि योजना बनाइरहेको छ ।
बिहीबार डा. रोशन पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । बिहीबार मात्र समिति गठन भएको र समितिमा छलफल चलिरहेको डा. पोखरेलले बताए । उनका अनुसार आइतबारसम्म केही सम्भावित ठाउँको अध्ययन हुनेछ ।
तर, तयार गरिएका वार्डमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनअनुसार आइसोलेसन वार्डमा हुनुपर्ने सेवा–सुविधा भने उपलब्ध छैनन् । उपचार गराइरहेका एक बिरामीबाट अर्कोमा रोग फैलिन नदिन हरेक अस्पतालले आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरी उपचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो वार्डमा छुट्टै जुत्ता, गाउन, मास्क, पन्जा प्रयोगको सुविधा हुनुपर्छ । त्यस्तै, बिरामीलाई जाँच्न प्रयोग गरिने स्टेथेस्कोप, थर्मोमिटर, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर, मोनिटरलगायत उपकरण छुट्टा–छुट्टै हुनुपर्ने मापदण्ड छ, जुन हाम्रा आइसोलेसन वार्डमा उपलब्ध छैनन् ।
नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा हेपाफिल्टरसहितको आइसोलेसन वार्ड हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । त्यसैगरी, वार्डमा हावा ओहोर–दोहोर हुनुहुँदैन ।
बजारमा मास्कको अभाव र कालोबजारी बढ्दै गएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक बजारको अनुगमन गरिहेको छ । तर, अनुगमन नाममात्रको छ ।
सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजरीलगायत वस्तुको बजारमा अभाव छ । दैनिक रूपमा केही फार्मेसी तथा पसलमा अनुगमन गरिए पनि अधिकांश फार्मेसी तथा सर्जिकल हाउसले मास्क तथा सेनिटाइजरीको कालोबजारी गरिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश फार्मेसीमा ‘यहाँ मास्क छैन’ लेखिएको भेटिन्छ । बजारमा कति मास्क छ भन्न् यकिन तथ्यांक न सरकारसँग छ, न व्यवसायीसँग नै । नियामक निकायको कमजोरीले नै मास्कमा कालोबजारी मौलाइरहेको छ ।